Ny antony hanaovana Tafika Masina | FJKM Amboniloha
Misy antony maro manosika ny fiangonana tsy ho tafandry mandry fa lasa manatanteraka ny fitoriana ny Filazantsara. Na eo aza ny fahalemen’ny fiangonana sy ny olana samihafatsy maintsy sedrainy, ary ireo asa maro sahaniny; dia tsy tokony hadinoiny, fa ny fanambarana ny hafatra mahafaly dia tokony ho fiainany. Asa tokony hataon’ny fiangonana laharam-pahamehana ny fitoriana ny Filazantsara, satria ny Soratra Masina dia mampibaribary izany tokoa. Mandeha mitory ny Fiangonana ary ho vonona hamita ny iraka eo an-tsorony, noho ireto antony ireto:
1. Baikon’ny Tompo ny fitoriana ny Filazantsara ary Izy rahateo no nanome fahefana sy naniraka ho fanatanterahana azy. Jesoa Kristy izay lohan’ny Fiangonana no maniraka. Izany hoe, andraikitra nomena ny fiangonana ny fitoriana; fa raha manadino izany izy, dia ananan’ny firenena rehetra trosa (Mat. 28:18- 20; I Kor. 1:7; Gal. 2:7; Rom. 1:14-15). Tena fiainan’ny Fiangonana ny fitoriana, Fa tsy Fihetsiketsehana voafetra ao anatin’ny fialantsasatry ny mpianatra fotsiny. Tsy asa, rehefa tiana hatao vao hatao, fa baikoilana fankatoavana hatrany.
Tahaka ny nidinan’I Kristy tonga nofo, nanatona sy naira-nonina tamin’ny olombelona mpanota, mba hanavotra azy; dia toy izany koa no tsy maintsy hivoahan’ny fianagonana ny rindrina efatra, mba hanatonany ny olona any ivelany, amin’ny alalan’ny Tafika Masina. Tsy tsara raha mijanona amin’ny fikenokenonana hibanjina izao tontolo izao izy, satria ny famonjena izao tontolo izao, no asa kendren’Andriamanitra tamin’ny nanirahany an’Jesoa (Jao. 1:14; Jao. 3: 16). Ao amin’ny Jao. 14:12, dia niteny Jesoa hoe: “Izay mino Ahy , ny asa hataoko ny hataony koa.” Mila manohy ny asan’I Kristy ny Fiangonana satria izany no porofon’ny fiainana velona. Ny fitoriana ny Filazatsara no fiainan’ny Tompo isan’andro, ary mila manahaka ny hataony koa ny Fianagonana.
Tahaka ny namitan’I Jesoa ny asa naniran’ny Ray Azy , dia takiana amin’ny Fiangonana koa, ny mamita ny iraka nanirahana azy. Ao amin’ny Asa, 20:24 dia ohatra velona I Paoly raha nampianatra fa asa tokony ho vitana ny fonompoana nanirahan’I Kristy ny mpanara-dia Azy, na toy inona ny olana tsy maintsy ho sedrainy. Raha iainan’ny Fiangonana tokoa ny asa fitoriana, dia ho faly Andriamanitra. Hisy tokoa mantsy ny fifiliam-be any an-danitra ny amin’ny mpanota iray mibebaka (Jao. 15:10)
2. Mandeha mitory ny Fiangonana, satria mbola be ny vokatra sy ny ondry very ivelan’ny vala, izay andrasan’ny Tompo. Maro noho izany ny olona nomiantso vonjeo, noho ny famatoran’ny ota sy ny ny devoly ary ny fahafatesana azy; Ny mponina tany Makedonia, ohatra, dia niantso famonjena, ka niteny hoe: “Mila mankaty Makedonia, ka vonjeo izahay.” (asa. 16:9).
Koa satria efa nahazo famonjena maimaimpoana ny fiangonana, noho ny fahasoavan’Andriamanitra, dia ilainy ny Mankato ny hafatry ny Tompo hoe: “Manomeza maimaim-poana” (Mat.10:8). Tsy tsara raha tiatenany Kristiana, fa ilainy ny mitia ny olona rehetra. Noho izany, dia mitory ny Filazantsara sy mijoro vavolombelona izy, mba hananan’ny olona fiainana mandakizay (Jao. 3:36)
Tokony ho tsapan’ny fiangonana fa Andriamanitra mihitsy no mahatsiaro marary, ny amin’ny fahaverezan’ny olona (Jona 4:11),ka manosika azy hanao Tafika MAsina. Endrik’Andriamanitra ny olona, ka tsy foiny ho amin’ny fahaverezana. Ao amin’ny Mat. 18:12 dia nanao fanoharana I Jesoa, fa “Raha misy manana ondry zato, ka nania ni anakiray, moa tsy hamela ny sivy amby sivy folo eny an-tendrombohitra va izy,ka handeha hitady ilay nania?”. Midika izany, fa raha misy olona tsy nandre ny famonjena na kely aza,dia tsy hiato amin’ny fitoriana ny fiangonana.
3. Ny Tafika Masina anefa dia tsy fitaomanany olona hanapa-kevitra fotsiny, fa , fanefena ny olona ho tonga mpianatr’I Jesoa mihitsy.(Mat28:19), Koa baiko ilana fankatoavana ny fitoriana, ho porofon’ny fitiavana ny Tompo niteny hoe: “moa tia Ahy va ianao? … fahano ary ny andriko” (Jao.21: 15-17. Raha tsy mitory ny fiangonana dia hadinin’Andriamanitra aminy ny ran’ny mpiara-belona aminy. Koa tsy azony hatao ny hanolokolo fotsiny ny fiainam-panahiny, nefa tsy tsaroany ny hafa mila famonjena. (Ezek. 33:7-9) Izany n,o mahatonga ny FJKM hametraka fitsipika ao ao anaty Fotodalana fa tena adidin’ny fiangonana ny mitory filazantsara mba handrenesan’ny Malagasy rehetra ny filazantsaran’I Kristy handraisany sy hanekeny azy ho tompo sy mpamonjy.
Tsy tokony hadinontsika, fa miasa mandrakariva ny devoly (Mat.13: 24-25), hany ka mila miasa andro aman’alina ny fiangonana, mitory ; tahaka ny Ray sy ny Zanaka tsy mitsahatra fa miasa mandrak’Ankehitriny. (Jao. 5:17) Raha tsy mitory ny fiangonana dia manome vahana ny fahavalony izy, no mampitombo isa hatrany ny olona mizotra ho any amin’ny fahaverezana. Najoro ety amin’izao tontolo izao ny fiangonana mba hanafika, satria na ny vavahadin’ny fiainan-tsi-hita aza, dia nataotsy haharesy azy (Mat.16 :18). Tsy fialantsiny ho an’ny fiangonana na oviana na oviana ny fahalemeny, na ny herin’ny fahavalony,fa ny zavatra masaka ao an-tsainy kosa diany hanambara ny vaovao mahafaly hatrany. Naorin’I Jesoany fiangonana mba hiady ny ny ady tsaran’ny finoana. Ny antony nanomezana ny Fanahy Masina diany hananany hery hijoroana ho vavolombelona. Tsy tokony hahamenatra araka izany ny mitory, satria herin’Andriamanitra ny Filazantsara. (Efes. 6:15;Asa.1:8; Rom. 1:16)
4. Ny fioriana ny Filazantsara dia fiainana no marika meneho ny maha krisrtiana. Handrianga ihany ny maha mpianatr’I Kristy, raha manadino ny fitoriana izy. Manakaiky ny fanjakan’Andriamanitra. Hivaly ny vavaka nampianarin’ny Topmpo hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao”. Irin’Andriamanitra ny hananan’ny olona rehetra anjara amin’izany fanjakana izany. Fanjakan’ny lanitra izay misokatra ho an’ny olona rehetra tsy an-kavanana. (Mar. 1: 15)
Maika ny fitoriana, satria antomotra koa ny farany ,hany ka manatanteraka azy ny fiangonana. Fanomezan’Andriamanitra ny fotoana, ka tsy tokony holanilaniana foana. Ilaina noho izany, ny manararaotra ny fotoana, amin’ny fanatanterahana ny asan’ny Tompo.Hoy ny fanampahankevitry ny AFF taona 1991 pejy faha 13 manao hoe: “Manao Tafika Masina isika mba ho fikatsahana ny fanjakan’Abdriamanitra sy ny fahamarinany sy ny fampandrosoana ny fiangonana.” (AFF 1991:13).
5. Mitory koaanefa ny mpino satria ny fitiavan’Andriamanitra mihitsy no manery azy. Ny fitiavan’Andriamanitra sy famindram-pony no nanosika an’i Paoly hitory. Mpanota tahaka ny olona rehetra izy, ary nanenjika ny fiangonana aza teo aloha saingy nanehoan’ny Tompo ny fitiaviny sy ny famindram-pony hany ka notoren’ny fitiavan’I Kristy izy ka tsy nahay nampangiana ny redaredampitia tao am-podia lasa nitory ny Filazantsara (IIKor. 5 :14; ITes. 2:3). Tsy tokony hadino koa anefa fa tombotsoa ara-dalàna ho an’ny mpitory ny asa nataony. Izay mitoryamin’ny hafa dia, manamafy ny finoan’ny tenany, no feno fifaliana anaty rahateo. (IKor. 9:23). Zava-dehibe ho fampafantarana ny mpino ireo antony ireo, ho dingana voalohany hanainga azy hankamamy ny asa fitoriana.
6. Rahany fiainan’ny fiangonana ankehitriny dia maro ny mianona fotsiny amin’ny mpivavaka ao anatiny, fa tsy mihevitra firy ireo olona tsy tambo isaina any ivelany.Vitsy ny mpitory ankehitriny, satria maro ireo vahoaka kristiana tsy mahalala akory ny antony tokony hanambaràna ny fahasoavana noraisiny, ampahafatarana ny kristiana fa tokony hitory izy, dia hisy hatrany ny hanolon-tena amin’izany, na dia tsy izy rehetra aza.Mapieritreritra ny teny nataon’ny mpandinika iray atao hoe: Marcel BLANDENIER, momba ny asa fitoriana hoe: “Tsy isika no miandry an’Andriamanitra fa Izy no miandry antsika.” (Mission renouvelée 1975:99). Miandry ny fiangonana amin’ny asa napetraka eo an-tsorony ny Tompo.
Noho izany, dia tokony ho raisin’ny mpitondra fiangonana an-tanàna sy ny tompon’andraikitra samihafa eo anivony, ny manentana ny olona, ho amin’izany asa masina izany. Tsy fiangonana hipetrapetra-potsiny mantsy no antenain’I Kristy, manao ho zava-dehibe ny famonjena ny hafa. Eto aho dia miara-manamafy amin’ny fiangonana katolika hoe: “Tianay ho hamafisina indray mandeha koa, fa ny adidy hitory ny Evanjely, amin’ny olona rehetra ,no anton-draharaha fototra nanirahana ny Eglizy; adidy sy raharaha voatery ilaina maika noho ny fiovana goavana sy lalina hita eto amin’ny fiaraha monina ankehitriny. Ny mitory ny Evanjely tokoa manko no fahasoavana sy fiantsoana manokana ho an’ny Eglizy, marika tena amantarana azy lalina indrindra. Matoa misy izy dia hitory ny Evanjely,izany hoe: ny hitory ny teny sy hampianatra ary ho laka-dranon’ ny fahasoavana,sy hampihavana ny mpanota amin’Andriamanitra no antom-pisiany” (papa Paoly VI 1979: 9)
Misy ny olona maniry ny hitory ny Filazantsara, kanefa noho ny tsy fahalalana, dia tsy sahy manao izany izy. Etsy ankilany indray dia eo ireo mafana fo fotsiny izao, hany ka mety hivaona amin’ny zavatra hafa ny fitoriana hataony. Noho izany, dia ilain’ny mpitory ny mahafantatra ny hafatra tokony entiny. Asongadin’ny Soratra Masina, fa tsy maintsy mitory ny fiangonana; tsy ampy anefa izany raha toaka tsy fantany akory ny votoatin’ny hafatra entina sy ny tanjona kendreny
Catégories :	Antony, Fampianarana, Tafika masina	/ par AnjGab 10 avril 2013